मध्य-डिसेम्बर मायालु पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री पहिले नै ध्यान दिएर नयाँ वर्षको लागि तयार गर्न थाल्छन्। यसलाई चयन गर्न र घर सजाउनु गर्न क्रिसमस ट्री सजाउनु र एक उत्सव वातावरण सिर्जना आवश्यक छ। विशेष गरी यो कुनै हिउँ छ, र मुड, क्रमशः, छैन यो छ जब, प्रयास गर्न आवश्यक छ। साथै, हामी पनि सोच्न पर्छ तालिका सजाउनु कसरी नयाँ वर्ष मा। आखिर, यो पनि असर गर्छ उत्सव मुड र घरमा माहौल। हरेक वर्ष यो आवश्यक नयाँ र फरक कुरा संग आएको छ। निस्सन्देह, महत्वपूर्ण भूमिका भोजन खेल्छन्। तर सबै कुरा बिस्तारै गर्नुपर्छ।
अब धेरै विकल्प र सुन्दर नयाँ वर्षको लागि तालिका सजाउनु तरिकाहरू छन्। यो सजिलै र चाँडै गर्न सकिन्छ। एक उत्कृष्ट embodiment एक क्लासिक संयम तत्व पूर्वी Horoscope छ। प्रत्येक वर्ष पूर्वी पात्रोमा एक विशेष पशु बुझाउँछ। यो विषय छुट्टी तालिका को सेवा मा राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबैलाई 2016 को बाँदर को वर्ष हो भनेर थाह छ। त्यसैले - यो कसरी नयाँ वर्ष को लागि एक उत्सव तालिका सजाउनु गर्न छनौट गर्नेहरूलाई लागि एक महान विचार छ।
उदाहरणका लागि, तपाईं ढाँचा उत्सव बाँदर संग एक डिस्पोजेबल cloths पूर्व-खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले तालिका र स्थान सेटिङहरू लागि प्रयोग गरिन्छ। पट्टियां एक प्रशंसक को आकार मा जोडेको गर्न सकिन्छ, यो एउटा धनी नजर दिनेछु। प्रत्येक प्लेट मा, तपाईं केही साना उपहार बक्स राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अग्रिम सोच्न लायक छ। आखिर, अतिथि पनि सानो उपहार प्राप्त गर्न खुसी हुनेछन्। बक्समा निलम्बन वा यस्तै केही मा एक हास्यास्पद बाँदर Wrenches को रूप मा लुकाउन सकिँदैन। त्यसैले सबैले सजिलै उत्सव अघि आफ्नो मूड लिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
एउटा सुन्दर मैनबत्ती - अर्को, नयाँ वर्षको तालिका हुन निश्चित हुन। तालिका सानो छ भने, तपाईंले एक चिटिक्क सानो सजावट बनाउन र यो तालिका को बीचमा राख्न सक्नुहुन्छ।
यो तीन मध्य मैनबत्ती, twig रूख वा तिनीहरूलाई एक पुष्पांजलि, गारलैंड आवश्यक हुनेछ। मोमबत्ती उच्च छैन, र मध्यम र व्यापक चयन गर्नुपर्छ। रंग कि कपडा र साधारण भित्री संग संयुक्त यस्तो रोज्नुहोस्। बजार मा तपाईं क्रिसमस ट्री र पनि एउटा सानो पुष्पांजलि संग खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को, हामी तीन मोमबत्ती को बीचमा राखे। पुष्पांजलि सबै कि धेरै, एक शब्द मा, धनुष, चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको, वर्षा, Serpentine सजाउनु। यो मधुर स्वर र धेरै देख्यो कि मुख्य कुरा।
तालिका snowflakes सजाउनु
तपाईं पनि सजिलै तालिका सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हातमा नयाँ वर्षको लागि। तपाईं रंग कागज, स्टेपल, कैंची आवश्यक यसो गर्न। यो सबै देखि यो snowflakes बनाउन आवश्यक छ। पहिले कोन यसलाई गुना सानो व्यास एउटा सर्कल कटौती र पक्ष हीरे, सर्कल, वर्गहरूको कटौती। तपाईं यसलाई विस्तार भने, यो एक हिमपात जस्तो हुनुपर्छ। यस्तो उत्पादनहरु शैम्पेन चश्मा वा साधारण चश्मा लागि उत्सव तालिका मा प्रयोग गर्नुपर्छ।
सही ढंगले tablecloth छानिएन
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या लागि तालिका कसरी सजाउनु गर्न? अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो tablecloth को विकल्प हो।
कारण तालिका मा व्यञ्जन, बर्तन र मसला वस्तुहरूको ठूलो विविधता छ भन्ने तथ्यलाई गर्न, राम्रो एक-रंग tablecloth चयन गर्न। उत्कृष्ट फिट यस्तो रङ (धेरै उज्ज्वल छैन) रातो, हरियो, चेरी, खैरो। यी रंग लगभग सबै नयाँ वर्षको सजावट मा पाइन्छन्।
त्यसकारण, तिनीहरूले मधुर स्वर छन् छुट्टी तालिका हेर्न हुनेछ। tablecloths साथै, हामी पनि सही ठूलो नैपकिन रोज्नुपर्छ। तिनीहरूले यसलाई साथ धुन मा हुन आवश्यक छ। यी पट्टियां देखि उपकरण लागि राम्रो pockets गर्छन्।
धेरै बस र चाँडै तिनीहरू थप्न र उपकरणहरू भित्र राखे। यसलाई चिटिक्क र सुन्दर तालिका मा देखिन्छ। साथै, यो अतिथि देखाउन पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री के कौशल मालिक ठूलो तरिका हो।
यो सेवा व्यञ्जन ध्यान महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरू सबै सही र उपयुक्त कन्टेनर हुनुपर्छ। सोही, को सलाद आउँदै वर्ष प्रतीक एक थूथन बाँदर, पिता क्रिसमस वा संख्या मा गर्न सकिन्छ। त्यसैले मासु, पनीर, संग परीक्षण गर्न सजिलो तरकारी काटन र केक।
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या मा तालिका सजाउनु कसरी गर्न सक्छ? उदाहरणका लागि, खिलौने र क्रिसमस ट्री को रूप मा एक पनीर र नाश्ता ठाँउ। यो हामीले लामो skewer लिनु आवश्यक छ। उबला गाजर को एक सानो घन यसलाई प्लग। skewer मा लगाउने एक त्रिकोण पनीर ठोस। त्यसैले त्यसो गर्न तीव्र कोण रूख शाखा को reminiscent। एक शीर्ष मा उसिनेर गाजर को बाहिर एक स्टार कटौती। greenery एउटा सानो रकम संग छर्कियो क्रिसमस ट्री को शीर्ष मा।
खाद्य क्रिसमस बल
सिर्जना गर्न खिलौने क्रिम चिज, केकडा लाठी, अन्डा, मेयोनेज र जैतून आवश्यक छ। अन्डा पूर्व-उसिनेर। पनीर संग अंगीठी र बाक्लो ठूलो सम्म मेयोनेज संग मिश्रण पछि लागे। तपाईं एक सानो नुन थप्न र स्वाद लसुन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि व्यक्तिगत रूपमा पनीर curd बलमा को गठन crabsticks खोक्रो फ्लोट मार्फत पीसने, चिप्स केकडा तिनीहरूलाई रोल। केही मा भित्री सारा जैतून ठाँउ। मेहमान जैतून पाता गर्ने एक, एक इच्छा गर्नुपर्छ भनेर चेतावनी गर्न सक्छन् र यो साँचो हुनेछ। तयार पनीर बलमा समाप्त रूख वरिपरि राख्न सकिन्छ।
बरफ को बाल्टिन
नयाँ वर्ष मा तालिका सजाउनु कति राम्रो गर्न? कसले भन्नेछु। शैम्पेन को एक बोतल सजाउनु र आफ्नो मूल फारममा छोड्न छैन राम्रो छ। तर तपाईं बरफ को एक बाल्टिन, र शैम्पेन तालिका मा भण्डारण गरिएको छ जो बरफ नै सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, विभिन्न रंग को घन बनाउन। बरफ को आकार सानो कृत्रिम गुलाब राख्न सकिन्छ। हामी सबै गुलाब स्थिर संग बरफ को टुक्रा प्राप्त गर्नुहोस्। यो धेरै सुन्दर छ र एक ताजा नयाँ वर्षको तालिका दिनेछु। मूल निर्णय फूल हिउँदमा स्थिर किनभने।
दर्ता अन्य सुझावहरू
अतिथि लागि कुर्सियों पछाडि एक धनुष संग सजाया गर्न सकिन्छ। यो सजिलै व्यापक साटन रिबन बाट गरेको छ। नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या लागि तालिका कसरी सजाउनु गर्न? यहाँ यो खाता सबै विवरण र subtleties मा लिन आवश्यक छ। खैर, सही समाधान पक्ष बहाना घूम्छ थियो। सबै अतिथि केही लुगाहरू मा आउन आवश्यक हुनेछ। तालिका मा, यो एक अविश्वसनीय उत्सव वातावरण सिर्जना गर्छ। साथै, यो धेरै मजा छ।
यसलाई ध्यान चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको भुक्तानी गर्न लायक छ। तिनीहरूले हुँदैन उत्सव तालिका मा, यो लापरवाहीसंग हेर्न हुनेछ। तिनीहरूले तालिका वरिपरि ठाउँ आवंटित गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि: पर्खालहरु, lampshades, छत मा। पनि एक किरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक उत्सव वातावरण बढाउँछ।
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या लागि तालिका कसरी सजाउनु गर्न? यो मिठाईहरू को डिजाइन ध्यान आवश्यक छ। तपाईं चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको को रूप मा एक क्रिसमस रूख वा चकलेट resembling, क्रीम संग muffins बनाउन सक्छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण जहाँ यो नयाँ वर्षको तालिका हुनेछ कोठा मा प्रकाश छ। र, को पाठ्यक्रम, रूख शैली मिलाइएको थियो कि। कसरी उज्ज्वल प्राप्त गर्न नयाँ वर्षको फोटो लागि तालिका सजाने? धेरै सरल! यसलाई प्रकाश को लागि मात्र होइन तर पनि चमकीले चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको को मात्रा मा ध्यान आवश्यक छ। फोटो मा कहिलेकाहीं तिनीहरूले धेरै राम्रो तरिकाले हेर्न छैन।
दिन आगो संरक्षण को
विवाह भएको नवविवाहितहरूका लागि के दिन?
जुकुनीबाट पेनकेक्सका लागि नुस्खा: छिटो, स्वादिष्ट, उपयोगी
को "terrarium" मा कार्ड कसरी स्थापना गर्न। चरण पुस्तिका द्वारा चरण